सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा प्रक्रिया सुरु, को को छन् दाबेदार ? – Rajdhani Daily
सशस्त्रमा डीआईजी बढुवा प्रक्रिया सुरु, को को छन् दाबेदार ?
काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) को पदपूर्ति प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एवं बढुवा समितिका सदस्य सचिव रामशरण पौडेलद्वारा जारी सूचनामा सम्भाव्य उम्मेद्वारले सात दिनभित्र बढुवा प्रयोजनमा आवश्यक पर्ने कागजात पेश गर्न भनिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा अहिले पाँच डीआईजी पद रिक्त छ । बढुवाका लागि वरिष्ठता र कार्यक्षमताका आधारमा एसएसपीहरु हरिशंकर बुढाथोकी, कृष्णभक्त ब्रम्हाचार्य, राजेन्द्र बस्नेत, हरिशचन्द्र अधिकारी, किशोर प्रधान, बंशी दाहालगायत अगाडि छन् ।
उपसचिव बढुवाविरुद्ध सरकारकै अधिकृत सर्वोच्चमा, १ सय… (9,383)
चीनसँगको नाकामा नेपालको पहिलो बीओपी : सेनाको… (3,811)